आज एकैदिन एक हजार सात सय बढि कोरोना संक्र मित निको भएर फर्के ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/आज एकैदिन एक हजार सात सय बढि कोरोना संक्र मित निको भएर फर्के !
काठमाडौ । आज एकैदिन एक हजार सात सय बढि कोरोना संक्र`मित निको भएर घर फर्केका छन । सोमबार अहिले सम्मका सबैभन्दा बढि संक्र`मित निको भएर घर फर्किएको स्वा`स्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार सोमबार एक ४४ सक्र`मित थपिएका छन ।
पछिल्ला केहि दिन यता दैनिकजसो कोरोना संक्र मितको तुलनामा निको भएर फर्केनेको सङख्या बढि देखिएको छ । यसरी दैनिक निको हुनेको सङख्या संक्र`मितको तुलनामा बढि देखिएपछि धेरैलाई नेपालबाट कोरोनाको त्रास बिस्तारै कमि हुने आशा पलाएपनि बिज्ञ`हरुले भने सरकारले परिक्ष`णको दायरा घटाएर संक्र`मितको सङख्या कम देखाउन खोजेको आरोप लगाएका छन
नेपालमा कोरोना संक्र मितहरुको संख्या १६ हजार ९४५ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जन संख्या म`न्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा निको भएर घर फर्कनेहरुको सं`ख्या १० हजार २९४ पुगेको छ । जानकारी अनुसार नेपालमा अहिले सम्म ३८ जनाको मृ`त्यु भैसकेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा संक्र मितहरुको संक्रमण दर एकदम कम भएको छ । नेपालले आज सम्म २ लाख ८९ हजार ३७१ जनाको कोरोना परी`क्षण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ६१३ जना आइसो लेसनमा रहेका छन् भने २३ हजार ४७० जना क्वारे`न्टा इनमा छन्
काठमाडौंका ७ वर्षी`य बालक सहित थप ९ जनामा कोरोना प्रमा-णित , २६७ पुगे कुल सं ख्या
खुशीको खबर : कोरोनाको खोप विश्‍वभर पठाउने चीनको तयारी, डब्लूएचओसँग अन्तिम छलफल